ဒီနှစ်​မှာ FBS ကုမ္ပဏီဟာ ၈နှစ်​ပြည့်​​မွေး​နေ့ ပွဲကို ခမ်းခမ်းနားနားကျင်းပမှာပါ. ဘာဖြစ်​မလဲမှန်းကြည့်​ပါ ကျွနု​ပ်​တို့့သည်​Clientများနှင့်​အ​တူ့့​ပျော်​ရွှင်​ဖွယ်အားလပ်​ရက်​မှာအတူဆင်​နွှဲပြီး​ပျော်​ရွှင်​မှုကိုအတူတူမျှ​ဝေခံစားလိုပါတယ်​. ဒီနှစ်​ဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့့အ​ကောင်းဆုံးနှစ်​ပါ. FBSသည်​ ငယ်​ရွယ်​ပြီးစွမ်​အားအပြည့်​အဝရှိ​နေဆဲပါ, တစ်​ချိန်​တည်းမှာပဲ ကျွနု​ပ်​တို့ရဲ့့traderနဲ့့partnerအ​ပေါင်းတို့ကို အ​ကောင်းဆုံး​သောဝန်​​ဆောင်​မှုတို့ကို​ထောက်​ပံ​ပေးနိုင်​ဖို့အတွက်​လဲအ​တွေ့အကြုံ​တွေအလုံအ​လောက်​ရရှိခဲ့ပြီလဲဖြစ်​ပါတယ်​.
့​မွေး​နေ့ပွဲမှာလာ​ရောက်​ပါဝင်​ဆင်​နွှဲသူclient​တွေဆီက လက်​​ဆောင်​​တောင်းရမယ့်​အစား, Companyဘက်​က​နေclient​တွေကိုလက်​​ဆောင်​​တွေအများကြီးပြန်​​ပေးဖို့ စီစဉ်​ထားတာပါ!
ကုမ္ပဏီ​ရဲ့့Clientအားလုံးပါဝင်​နိုင်​ပါတယ်​,Facebookမှာ FBSကို ဂုဏ်​ပြုစကား​ပြော​ပေးရုံနဲ့့ ရပါတယ်​. ဆုလက်​​ဆောင်​များတွင်MacBook and iPhoneကဲ့​သို့့​သော​နောက်​ဆုံ​ပေါ် Appleပစ္စည်းများနှင့်​ သင့်​ရဲ့အ​ကောင့်​ဖြင့်​ထုတ်​ယူနိုင်​​သော​ငွေသားဆုမဲများလဲပါဝင်​ပါတယ်​.
လူတိုင်းပါဝင်​​ဆင်​နွှဲနိုင်​ပါတယ်​.Personal Areaရှိ စည်းကမ်းချက်​များကိုဖတ်​ရှုပြီး ကံစမ်းမဲမှာပါဝင်​ ဆင်​နွှဲပါ: